Iingcebiso Zokunakekelwa Kwamehlo
Njengoko isakhelo esingaphumelelanga sinakho ukubulala "i-masterpiece, kunye neyesundu ezingapheliyo ubuso obuhle ziza kuphazamisa zonke ezinye iindlela zakho. "Iimvumba - okona mzuzwana", - abaculi bokuzenzela baxoxisana emsebenzini, kwaye bachanekile.
Igama elidumile elithi "Hermitage" eSt. Petersburg. ILoberto da Vinci Hall. Jonga ngokugqithiseleyo: uMadonna uBenoit akanakuze afuneke amaconco. Kwaye ngoku - ukuphawula kwesi sikhokelo: "ULeonard wawagatya ngamaboda akhe ngamabomu ukuze ahlule ubuso kwiindawo ezimbini, aphule ukuvisisana kwakhe."
Ifashoni yombono weenki ayizange iguqulwe ngokukhawuleza njengoko izitayela zokugqoka zabesifazane, kodwa ke enye inxalenye yobuso ingaqwalaselwa ngokupheleleyo ngexesha eliphi na le ncinanekazi. Ngokomzekelo, amaYiputa aseMandulo, atyumba iinki ngeensipho. NgeMinyaka Ephakathi, ngokuchaseneyo, umyalelo wawufuna ukuba umfazi abe nebunzi elivulekile, ngoko ke, nangona kunjalo kuyingozi, izishiya zisuswe ngokupheleleyo ebusweni kunye ne-wax eshushu.
Ngekhulu le-XVIII, kwakuneemeko xa iziNgesi ziphakamisa iilebe ... ngoncedo lweboya be mouse. Kwaye oku kukude kuzo zonke iinkcazo apho abafazi bahamba khona. Kwiminyaka ye-20 yekhulu lokugqibela, amaqabunga ahluthwa ngonya, ahlawuliswa aze amele umtya omnyama omncinci kunye nokuphela kwayo, kwaye kuthi, kuma-80s, amaqabunga amancinci, amancinci angumqondiso wetoni elungileyo (khumbula i-Old Madonna clips).
Izilumkiso zomsongelo olumkiso phakathi kwabantu, sichaza: namhlanje asikho isiko 'sokuhleka' phezu kweenki. Ngefashini - yemvelo. Zigweba wena: USarah Jessica Parker akanamahloni ngeenkuni ezinzima zendalo, uPrada wenza ubuso bakhe bano-Jenna Fisher oneminyaka elishumi elinesibhozo, engafuni "ukuthambisa" iimbundu zakhe, eziya kuye.
Kwimodeli ethandwa kakhulu namhlanje - uNatalia Vodianova , kunye nakwezinye izakhiwo zikaNizhny Novgorod, - amaqabunga enyantya. Nangona kunjalo, "ubume" beelishi ezinjalo bukhohlisayo. Bazifuna ukuba bahlale bengqondo, kungenjalo kulula ukuwela umgca phakathi komfanekiso wesiganeko kunye nesimo esichazwe yincinzana "ayikhathaleli."
Ifom okanye umxholo?
Ubume bemvelo kule nkalo ayithethi iinciti, zikhula ngokukhawuleza ngeendlela ezihlukeneyo. Iibhokhwe mazibe zide ngokukhawuleza njengoko kufuneka.
Yaye kunye nokulungiswa kwazo - njengokuhamba nge-pedicure: ukusebenza komatshini akuvumelekile. U-Eric Indikov, umculi we-Chanel: "Ujonge kwisibuko ngokuthe ngqo, awuyi kubona iimbombo zangaphandle.
Yaye ukuba uzama ukulungelelanisa i-eyebrow nganye, ubeka engozini yokuba nguJanus obhekene nobabini. " Ubuncinane qalisa ngcono nge-beauty salon. Ingcali iya kucela ifomu efanelekileyo ebusweni bakho. Kwaye konke okushiywe kwisabelo sakho kukukunceda rhoqo, ukususa iinwele ezingaphezulu.
Ukuqhawula amaconsi - nantoni na oyithethayo, umsebenzi ufana ne-masochism. Kodwa unako ukuxolelana nayo ukuba ulandela imithetho embalwa elula.
- Ukucima amaqabunga akho ngentsasa ekuseni, ngaphambi kokuba uhlambe. Emva koko ubomvu obunokwenzeka buya kubakho ngexesha oqala ukunyanzelela.
- Eyona nto ikulungele ukufeza inkqubo emini: hlala ngefasitela uze uthabathe isibuko esikhanyayo.
- Susa ngokucophelela lonke lotion lokwakheka: isikhumba akufanele sibe yi-greasy.
- Ngepensile ebomvu, udwebe umgca wendlela yokukhula kweenwele: oku kuwuphawu lwakho.
- Ungaze uhlambe ngaphezu kweenwele enye ngexesha, kungenjalo uya kufumana izihlalo ezinzima.
- Ungalokothi uphawule iilebhu zakho ngaphezulu. Kwigunya lakho, kuphela ezo ziboya ezingezantsi. Kwiimeko ezigqithiseleyo, iinwele ezongezelelweyo ezigqitywe ngaphaya kwe "umgca jikelele" zingacaciswa ngokucacileyo (qaphela ukuba ungabonakali ukuba amacwecwe abonakale).
- Qala ukusuka phakathi kwe-eyebrow, hamba kuqala kwindlebe, uze ufike phakathi-ukuya ekhaleni.
Ulawulo lwegolide: ukukhupha iinwele kuphela ekukholeni kwazo. Emva koko baya kukhula njengoko kulindelwe, kodwa kungekho kwiindlela ezahlukeneyo.
- Sebenzisa iimpembelelo zekhwalithi. Ngokuchasene neenkolelo ezithandwayo, ukuxhamla ngeengcebiso ezingenangqiqo kwenza umsebenzi wabo ube ngcono kunokuba "zibukhali."
- Ukunciphisa intlungu, unokwenza ulula ulusu ngeminwe emibili.
- Emva kwenkqubo, qhawula iilebhu zakho nge-cotton swab ehambelana ne-tonic okanye i-antiseptic yemvelo, umzekelo, i-oil tree tree. Oku kuya kuthintela ukucaphukisa kunye nezifo.
Ibala kunye nombala
Ukuba ujwayele ukutshintsha umbala weenwele kunye noxinzelelo olufanayo njengo-Queen of Reincarnation Linda Evangelista, ubanjelwe engozini: iimbumba zingenakuhambelana nomthunzi omtsha. U-Natalia Stanevich, umculi we-make-up Shiseido: "Kukholelwa ukuba iinki zifanele zifanane nombala weenwele , kodwa, kwindlela endingazijonga ngayo, kungcono ukuba ngaba enye okanye ezimbini i-shades lighter. Ukubukeka kuza kuba ngaphezulu kwesondo. "
Ngokuchasene noko, umntu onamaqabunga amnyama akhangeleka, uthi umculi wezandla uCarol Shaw. Ngoko ke, ukuya kumgcini wezinwele ngethemba lokugqithisa ngokugqithisileyo, ungayikhohlwa ukwenza idibantimenti kunye ne-cosmetologist-uya kulubala amanqatha akhe kumbala ofanelekileyo.
Ngemva kwemva, iinwele ezinde okanye i-bang zinokuphazamisa amaconco, ngoko uNatalia Stanevich wase Shiseido weluleka ukuba athathe umyalelo wokuwabhinqa nge-brush ekhethekileyo okanye ukusebenzisa i-gel yokulungisa i-gel (i-Translucent Eyebrow Shaper, Shiseido). Hlanganisa iinwele zakho, ukuze wandise amehlo akho ububanzi.
Ukuze unike amavolumu evolumu, sebenzisa ipenseli ekhethekileyo. Umgaqo oyintloko, othe ngenxa yesinye isizathu isoloko esilinga ukuphulukana nentlungu ngaphambi kokushiya indlu: ipencil yokuhamba kufuneka ibe yinto elula kunye neqhekeza, ngokuqinisekileyo kwindlela yokukhula kweenwele. Umzila oqhubekayo ngokukhawuleza udala umonakalo ongavumelekanga, njengamacwe e-clown.
Iipencilisi ezichanekileyo kufuneka zibe ne-brush kwesinye isiphelo. "Isixhobo esinobulumko" esibizwa ngokuthi "Umculi" we-Browser iphambili ephuma ku-Estee Lauder, ukukhokela kwayo kuncinci, kwaye ukugqithwa kuqinisekisiwe (kungekuhle kakhulu, kodwa kungabi nzima kakhulu) ukuba amacwecwe anepencilisi emangalisayo ayenzeka njengendalo. ukuziqinisa, okugcina ixesha.
"Yaye ukuba amacwe ayenayo i-eyeliner eyomileyo okanye i-powder ekhethekileyo yomthunzi ofanelekileyo (umzekelo, i-Le Sourcil de Chanel) kwaye uyisebenzise kunye nomfaki-sicelo, othe wathinta iincwebe. Uya kufumana umthamo wemvelo oyifunayo, "ucebisa uEric Indikov. Ukucoca izimonyo ngokuhlwa, ungalibali malunga neenki. Kuphela akudingeki ukuba ubaxubhise ngentshiseko, ngenxa yokuba iinwele ezinqabileyo zingaphula kwaye ziqale ukukhula kwizikhokelo ezingalindelekanga.
Ukuba ungumnikazi weeyusi ezingabonakaliyo, kodwa ukunyamezela kwengelosi kwaye unomnqweno wokuba mnandi nangona ubuthongo obunobuninzi, unokuzama ukuzenzekela ngokusisigxina. Lo mzobo uyenziwa ngamacandelo amabini: nokuba udweba imigqa efana nokukhula kweenwele, okanye ukulinganisa i-pencil tint. Kwimeko yokuqala, ukunakekelwa kwenkosi kukukhulu, kodwa umphumo wendalo.
Nangona kunjalo, abaculi bezakhelo, abajwayele ukusebenza kwiinqambi kunye nokupasa amaphephancwadi, bahluke ngokuthe ngqo kwi-tattoo: "Kungakhathaliseki ukuba inkosi izama njani, iinqununu ziza kubonakala zingekho ngokwemvelo, kwaye ngoko ke ziyingozi," kusho uEric Indikov. I-tattoo ye-eyebrow ayiqinisekisi ukuba ibonakale ingabonakaliyo kwiminyaka emininzi. I-pigment ingadlala okanye ishintshe umthunzi, ngoko yonke iminyaka emibini, kunye neyona nto - kanye kanye ngonyaka uya kumenywa kwinkqubo yokulungisa. Ukongeza, musa ukulibala ukuba imodeli iyatshintsha. Ngokukhawuleza iinki ziza kuphinda zifakwe kwifashoni? Emva koko, itekisi ebusweni ibunzima.
Ndiyicoca njani ubuso bam ekhaya?
Izindebe ezimnandi ekhaya
Ulusu lobuso lwaba lome: izizathu
Ukuhlanjululwa kwesikhumba ebusweni kunye nezilwanyana zomntu
Unokukhetha njani iigrafu ezifanelekileyo?
I-pizza kunye nebhekoni, anyanisi kunye nochumisi omuncu
Isaladi yeklabishi kunye ne-cornichons
Uxinzelelo lwegazi oluphezulu ekukhulelweni
Iindawo ezithandwayo zabesetyhini kunye namadoda
I-Easter kwi-sweetened brewed
Kulula ukususa kwi-fover's beef
Ukuqhayisa ngeeshizi kunye nebhekoni
Umyeni utshintsha umfazi wakhe
Iphayitha yePea kwi-multivariate